Mareykanka iyo Ingiriiska oo Madaxda dowladda ugu hanjabay cunaqabateyn - Awdinle Online
Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada inay dib ugu laabtaan wada hadallada si hehsiis buuxa looga gaaro khilafka doorashada Soomaliya.
“Go’aanka lagu kordhiyay muddada dowladda Federaalka ayaa wiiqeysa sii socoshada nabadda iyo amniga dalka. Waxaan ugu baaqeynaa Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowlada Federaalka inay dib ugu laabtaan wada hadalada isla markaana ay isla meel dhigaan wadadii horey loogu mari lahaa”
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ay isticmaali doonaan aalad walba oo ay uga hortagayaan muddo kororsiga oo ay ku jiraan cunaqabateyn, xadidaada safaro, si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasilloonida
Dhinaca kale, Dowladda Britain ayaa ku boorrisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka, si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka.
Wasiirka Arrimaha Afrika ee UK James Duddridge ayaa dhankiisa waxaa uu ugu baaqay hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay si degdeg ugu laabtaan wada hadalada si loo helo xal wax ku ool ah.
“Maaddaama uusan jirin is-afgarad horseedaya doorasho loo wada dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo in la qabto iyada oo aan dib loo dhigin, xiriirka bulshada caalamka iyo hoggaanka Soomaaliya ayaa is beddelaya, UK waxay lashaqeyn doontaa saaxiibadeeda caalamiga ah qaab mideysan oo dib loogu qiimeeyo xiriirkeena iyo nooca caawinaada aan siino Soomaaliya.
Xaalada Siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan waxaa ay mareeysaa meel xasaasi ah, waxaana khlafka doorashada Somaliya uu yeeshay waji kale kadib markii Golaha Shacabka ay muddo kordhin u sameeyeen Madaxweyne Farmaajo iyo Hay’dadaha kale ee dowladda.
Previous articleFarmaajo oo saxiixay Sharciga muddo kordhinta ee Baarlamaanka ansixiyeen